Aqoonkaab Isticmaalka Barnaamijka Instagram oo kordhay | Aqoonkaab
Isticmaalka Barnaamijka Instagram oo kordhay
Jun 22, 2016Technology
Barnaamijka instagram waa barnaamij lagu wadaago sawirada iyo muuqaalada kooban gaar dadka isticmaala moobilada ku shaqeeya android iy iOS , barnaamijkan waxa lasoo saaray sanadkii 2010 , waxaanu markiiba si dhakhso ah u helay isticmaalayaan badan taas oo sababtay in sanadkii 2011 lasoo geliyo 150 milyan oo sawir .
isticmaalayshiisuna gaadheen illaa 10 milyan oo isticmaale guud ahaan .
sanadkii 2012 barnaamijka instagram waxa iibsaday shirkadda facebook , waxaanay ku iibsadeen qiimo dhan 10 bilyan oo doolar , intaas wixii ka dameeyey barnaamijkani waxa uu ku jirey koboc joogta .
Hadaba aasaasaha facebook isla markaana iska leh adeegan instagram ee mark zuckerberg waxa uu shaaca ka qaaday in bil kasta instagramka ay isticmaalaan dad gaadhaya ilaa 500 milyan , halka 300 milyan isticmaalena maalin kast isticmaalaan istagramka , waxa kale oo uu sheegey in laban laabmeen dadka isticmaalaya instagramka labadii sano ee u dambeeyey .
Halkan ka akhri qoraalka aasaasaha facebook kaas oo uu ku baahiyey bartiisa facebook
Previous PostHenry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods Next PostWinrar 5.4 64/32 bit